जब रबिना टण्डनले दुई अभिनेत्रीका साथ अक्षयलाई रंगेहात पक्राउ गरिन् … - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बलिउड फिल्म उद्योगका खेलाडीको रुपमा परिचित अक्षय कुमार सफल अभिनेता हुन् । लामोसमय देखि उनले फिल्म उद्योगमा राज नै गरेका छन् । उनले १०० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेर करोडौंको फ्यान कमाएका छन् । उनी फिल्म र लभ अफेयरको कारण पटक पटक चर्चामा आउने गर्दछन् ।
बलिउडका सुपरस्टारसँग यिनको नाम जोडिएको छ । पुजा बाद्रा, आइसा झुल्का, रबिना टण्डन, रेखा, सुस्मिता सेन, सिल्पा सेट्टी र प्रियंका चोपडा यिनका गलफेन्ड्र हुन् ।
अहिले उनी सुखद बैवाहिक जिबन बिताइरहेका छन् । श्रीमती ट्वीङ्कल खन्ना र बच्चाहरुसँग आरामदायी जिबन बिताइरहेका अक्षय अझै पनि रबिनालाई उतिकै माया गर्छन् । तर एउटा यस्तो मोड आयो जस्ले गर्दा अक्षर र रबिना छुटिन पुगे । “खिलाडीनकी खिलाडी” चलचित्र पश्चात उनीहरुले विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए तर रेखालाई बीचमा ल्याएर उनीहरु बीच ठूलो झगडा पर्यो जस्ले गर्दा सबैभन्दा प्रिय जोडीको प्रेमकहानी अन्त्य भयो ।
. बिवादमा आउन नचाहने अक्षय कुमारलाई पर्यो फसाद
. गोजीमा २ सय रुपैयाँ नभएर भौतारिएका अक्षय सर्वाधिक कमाई गर्ने कलाकारको सूचिमा परे
उनले अक्षयलाई सिल्पा सेट्टी र सुस्मिता सेनसँग रंगेहात पक्राउ गरेको थिइन् । त्यसपश्चात उनले पटक पटक चेतावनी पनि दिएकी थिइन । तर खेलाडी अक्षयलाई रबिनाको मायाले पगालेन र उनी टाढा भइन् । पछि अक्षयले सिल्पालाई पनि धोका दिए जस्का कारण उनी पनि डिप्रेशनको शिकार भइन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, फाल्गुन २४ २०७७ १४:४९:५१
Tags :अक्षय कुमार